SingForYou.net - Maung Gyi Khaw Yar
Maung Gyi Khaw Yar
Tags : မြန်မာ့၇ိုးရာကျေးလက်သီချင်းစစ်စစ်လေးပါ
By : koaungkhaing on Jan 12, 2010
Score: 93 Rating: 4.89 Comments: 24
Maung Gyi Khaw Yar's Description
မြို့သူပျိုချောနုနုနကို ချစ်သူတောသားက ရွာကို အလယ်ခေါ်တာပါ..ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ခေတ်ဟောင်းတေးလေးပါ။ တချိန်က အကော်ဒီယံအုန်းကျော်နဲ့ သန်းသန်းဆင့်။ နောက်တော့ ရာဇာဝင်းတင့်+မာမာအေး။ အခုတော့ ကိုအောင်နဲ့မခိုင် ပေါဗျ့ာ...
a hem..a tan ka top taw2 mite dae
kohtwe49 on Jun 18, 2010 0
lay sar par tal BroGyi Ko AungKhaing so htar tar paing lite tar
pusuu on Mar 17, 2010 0
kogyi7 on Feb 22, 2010 0
Taw_Thar_Lay on Jan 13, 2010 0
Very nice. ***** :-) It took five months to get my first5points when I sang with Poe Ei San one year ago.
chan2008 on Jan 13, 2010 0
hippo on Jan 13, 2010 0
လက်စသတ်တော့ ကိုအောင်နဲ့ မခိုင် တစ်ယောက်တည်းကိုး . . . Really nice bro ***** . . .
greenlay on Jan 12, 2010 0
မခိုင်အလှည့်ကိုစောင့်နေတာ ပါလည်းပါဘူး ... တစ်ယောက်ထဲ ပိုင်နိုင်စွာ သီဆိုထားတာ ကောင်းလိုက်တာ အကိုရေ *****
koaungkhaing on Jan 13, 2010 0
အော် ကိုအောင်ခိုင်ပါဆိုနေမှ တယောက်ထဲပေါ့ ကျေူးဇူးပဲ ညီမစိမ်း
pp01 on Jan 12, 2010 0
Taw taw pg ng tal..Ag yin athan ne tu tal bro..:D***** EXCELLENT!
Ilovemusic on Jan 12, 2010 0
တယောက်တည်းကို အမုန်းဆွဲသွားတယ်....ကောင်းလိုက်တာဗျာ...နားထောင်လို့....ရေလည်မိုက်တယ်...ဘရာဗို.....5*4u bar...bro gyi yay....
winwinthant on Jan 12, 2010 0
မခိုင်ဆိုလို့စောင့်လိုက်တာ သီချင်းသာဆုံးသွားရော ဟဟဟ အရမ်းကောင်းတယ် အဆိုရောအသံရော အားပေးသွားပါတယ်....**************************
အော်...နာမည်က ကိုအောင်ခိုင်လေ.. ဒီတော့ မခိုင်ဆိုတာလဲ သွပ်ပြားပဲပေါ့ ညီမရဲ့..ကျေးဇူးပဲ..
tharnge123 on Jan 12, 2010 0
U U ka lel, thu doe lo bel, Shay nar mel2lone tu tae' Aunty ta youte youte ne' twel so tar hote bu, Law ba kyi lite tar, ta youte htel so tal. Naut tar naw U U, A than gyi ka taw,amite sar gyi,akhant sar gyi, So htar tar lel , A yan good tal. Thar Thar , arr pay thwar par tal bya, Million stars par U U *****************************************
paradise on Jan 12, 2010 0
a ha ha... ...song lay ka lal kg....descriptiong lay ka lal...myine.....a so ka dort...ta bat kan kat laut ag ko taw par pay tel...ကိုအောင်နဲ့မခိုင် yayyy......a than YELLOW gyi ne' sho htar tar....a yan listen loh kg dal byar...*********
turikimuriki on Jan 12, 2010 0
a yan ko nar htaung loz kg par tel bro...aso kg pee thar so taught bar ma ko pyaw sa yar ma shi buu... bravoooo.... 5* :))))
thant on Jan 12, 2010 0
ayann kg tae.....ayann kyiuk tae song lay par......ta yout htal so ya tar taw taw maw mal htin tal.....aso paing....athan kg so tot narr htaung lo taw taw kg tal.....*******
koaungkhaing on Jan 12, 2010 0
ဟုတ်တယ်..မောလိုက်တာဗျာ.. ဆိုရင်း လှည်းစီင်္းပြီး လယ်တောထဲရောက်သွား သလိုတောင်ခံစားရတယ်..thanksalot Ms. THANT.
sumaylay on Jan 12, 2010 0
wowwwwwwwww........ayan ko kg tal so twar tar........ako kyi lar .......oo oo lar tot thi woo..........ahee.........vocal ka lal ayan kg tal.........nice one par shin.............*****
myobala on Jan 12, 2010 0
သမီးအတွက်က သီချင်းက နဲနဲမြင့်နေတယ် အမကြီးက ကမ္ဘာမကြေပဲ..ဆိုတတ်တာ..